Ciidanka DF oo dib ula wareegay Balcad | KEYDMEDIA ONLINE
Ciidanka DF oo dib ula wareegay Balcad
Afhayeen u hadlay dowladda ayaa sheegay in 14 kamid ah kuwii weerarka kusoo qaadey magaaladda in lagu dilay dagaalki ay la galeen Ciidamada Xoogga dalka.
BALCAD, Soomaaliya - Saraakiisha Militeriga Soomaaliya ayaa sheegay in Ciidanka xoogga dalka dib ula wareegaan Maanta degmada Balcad, oo saakay aroortii Kooxda Al-Shabaab dagaal kula wareegtay.
Dowladda ayaa sheegtay inay ku dishay weerarka Balcad 14 dagaalyahan, islamarkaana dhinaca Ciidanka uga dhintay hal askari, waxaana jira dhaawac dad shacab ah soo gaarey. Balcad oo 30-KM dhanka waqooyi uga beegan Muqdisho ayaa mudo ku jirtay gacanta DF.
0 Comments Topics: alshabaab amisom balcad gobolka shabeellaha dhexe